Puntland oo Dowladda Somaliya ku eedeysay dhaqdhaqaaqyada alshabaab ay kawadaa puntland – STAR FM SOMALIA
Maamulka Puntland ayaa Dowladda Federalka Somaliya ku eedeeyay in ay ku lug leedahay, qorshaha ciidamo hubaysan ay ku qabsadeen deegaano ka tirsan Gobolka Mudug iyo Nugaal.
Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Cabdi Xersi Cali (Qarjab) oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Garowe, ayaa sheegay Dowladda Dhexe ee Somaliya inay ku lug leedahay arintaasi, isaga oo sheegay ciidamada qabsaday Garacad iyo Garmaal inay soo mareen Degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug.
“Waxa ay soo mareen Xarardheere ilaa iyo wadadaa dheer bey soo mareen barigeeda iyo badeeda, waxaana oran karnaa arintaasi abaabulka ah Dowladda Somaliya ee Federalka ayan ka madax banaaneyn oo ay lug ku leedahay.” Ayuu yiri Wasiirka Amniga Puntland.
Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Qarjab ayaa tilmaamay in Puntland ay ka warhayso ciidankii hubaysnaa inay gaareen deegaanka Garmaal oo ka tirsan Gobolka Nugaal.
Wuxuu ku hanjabay Puntland inay difaaci doonto shacabkeeda, islamarkaana ciidamada ammaanka Puntland ay yihiin kuwa u taagan Difaacida Shacabka iyo Maamulka intaba.
Xoogag hubaysan oo Shabaab ka tirsan, ayaa xalay fiidkii la wareegay gacan ku haynta Deegaanka Garacad, kadib markii dhanka badda ay ka soo galeen iyaga oo wata Doomo.
Ciidankii qabsaday Garacad ayaa saaka u sii gudbay Gobolka Nugaal, kadib markii ay qabsadeen deegaanka Garmaal oo ka tirsan Gobolkaasi, halkaasi oo hada ay ku sugan yihiin.
Shabaab ilaa hada kama aysan hadlin deeganada ka tirsan Gobolada Mudug iyo Nugaal oo ciidamadooda ay la wareegeen gacan ku hayntooda.